၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်ပင် ဆန့်ကျင်နေသည့် ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်ပင် ဆန့်ကျင်နေသည့် ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေ
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ၊ ၂၀၁၂
၁၉၈၃ခုနှစ် နိုင်ငံသားနည်း ဥပဒေများတွင် ၁၈၂၃ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်နေထိုင်သူများသည် တိုင်း ရင်း သား မျိုးနွယ်စုများ၏ လူမျိုးအမည်များနှင့် တူနေစေကာမူ ထိုသူများသည် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပါ လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
တဖန် ၁၉၈၂ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေပုဒ်မ ၈(ခ) တွင် နိုင်ငံတော်ကောင်စီသည် နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးငှာ မွေးရာ ပါ နိုင်ငံသားမှအပ မည်သူ့ကိုမဆို နိုင်ငံသားသို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ အဖြစ်မှ ရုပ် သိမ်းနိုင် သည်ဟု ဆိုထားပြန်ပါသည်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် တင်ပြချင်တာကတော့ တည်ဆဲမြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေမှာပါတဲ့ ( ၁၈၂၃ ) ခုနှစ် မတိုင်မီက မြန် မာ နိုင်ငံ၌ ပင်ရင်းနှိုင်ငံအဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ တနည်းအားဖြင့် ၁၈၂၃ခုနှစ်ဆိုသော သက္ကရာဇ် မှာ ယနေ့အချိန်မှာဆိုရင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၉၀လောက်ရှိနေပါပြီ။ ရာစုနှစ်၂ခုနီးပါးလောက် အချိန် အခါ အထောက်အထားတင်ပြရန်မှာ မလွယ်ကူသောကြောင့် တိုင်းရင်းသား တစ်ဦးဦးအား ၁၈၂၃ မတိုင်မီ မြန်မာနိုင် ငံသို့ လာရောက်နေထိုင်ကြောင်း အထောက်အထား တင်ပြနိုင်မှ တိုင်းရင်းသား အဖြစ် အသိ အမှတ်ပြု ရမယ်ဆိုရင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပါလျက် တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှုဆိုသော အခွင့် အရေး ကို ဆုံးရှုံးသွားမည်မှာ ဧကန်မုချ။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု မခံရသော ကြောင့် နိုင်ငံ သားဥပဒေပုဒ်မ(၅) အရ မွေးရာပါနိုင်ငံသားဟု အသိအမှတ်ပြုခြင်း မခံရသည့် အပြင် အခန့် မသင့် ရင် ပုဒ်မ ၈(ခ)အရ နိုင်ငံသား အဖြစ်မှတောင် ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံး၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သည်ဟု အတိအကျမပြောနိုင်ပါ။ ဒါ့အပြင် ၁၉၈၃ ခု၊ နိုင်ငံသားဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အရ နိုင်ငံ သားစီစစ်ရေး ကတ်ပြားများပေါ်တွင် လူမျိုး၊ ဘာသာနဲ့ အလုပ်အကိုင်များ ကို ဖော်ပြထားခြင်း သည် လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနန္တရ၊ အဆင့်အတန်း စသည်တို့ကို အကြောင်းပြု၍ ခွဲခြားမှုမရှိ စေရ ဟူသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၄၈ နဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိမရှိကိုလည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါ တယ်။ မည်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်သည်၊ မည်သည့် ဘာသာကို ကိုးကွယ်သည်ဆိုတာကို နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကတ်ပြားများပေါ်တွင် မဖော်ပြဘဲ နိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ သိရှိလိုပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန မှတ်တမ်းများတွင် ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ ဒေတာဘေ့စ်စနစ်ဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းထားပါက သက် ဆိုင် ရာမှ အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခြေခံအခွင့်အရေး မဆုံးရှုံးစေရန်အတွက် ၁၉၈၂ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ ကို ခေတ်သစ်၊ စနစ်သစ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ ယုတ္တိရှိအောင်၊ လူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံညွှန်း များနဲ့ ကိုက် ညီအောင် ပြင်ဆင်ပြီး ကွတ်ခိုင်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတီခွန်မြတ်အဆို တင်သွင်းပြ သည့် အတိုင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သည့်ဥပဒေ တစ်ရပ် ပြဌာန်းပေး သင့် ပါကြောင်း ဤလွှတ်တော်သို့ အလေးအနက်ထား အကြံပြု တင်ပြအပ်ပါ တယ်ခင်ဗျာ။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ကွတ်ခိုင်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတီခွန်မြတ် ၏ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး အဆိုကို ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူလွှတ်တော်အမတ် ဦးရွှေမောင်၏ ထောက်ခံ ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များသည် ရုပ်သံမှတ်တမ်း ၅း၄၀ မိနစ် မှစတင်သည့် ဆွေးနွေး ချက်များကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted on December 18, 2012, in ဥပဒေ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Arakan News Update: Ever Worsening Situation of Rohingyas in Arakan
ပသီအမျိုးသားကွန်ကရက်အမည်ဖြင့်ခွင့်မပြုသည့် အတွက် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး ကွန်ကရက် အမည်ဖြင့် ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရ … →